Xildhibaan Barre Aadan Ducaale ayaa ugu baaqay in 48 saac gudahood ay ciidamada Kenya ay aargudasho deg deg ah ku dhaqaaqaan – STAR FM SOMALIA
Iyadoo maalinimadii jimcaha ay kooxda Alshabaab deegaanka Ceelcadde ee gobolka Gedo ku xasuuqday ciidamo ka tirsan Kenya ayaa waxaa arintaasi ka hadlay Xildhibaan Barre Aadan Ducaale oo ah hoggaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka Kenya.
Xildhibaan Barre Aadan Ducaale ayaa sheegay inuu aad uga danqaday goortii uu maqlay in xasuuq ba’an ay Alshabaab u geysteen ciidamada Kenya ee ku sugan deegaanka Ceelcadde.
Xildhibaanka ayaa Dowlada Kenya iyo ciidamada kaga sugan magaalada Kismaayo ugu baaqay in 48 saac gudahood ay ciidamada Kenya ay aargudasho deg deg ah ku dhaqaaqaan.
Xildhibaanka waxa uu sheegay in marnaba aysan suuragal noqon doonin in ciidamada Kenya ay ka baxaan Somalia ilaa laga gaaro hirgelinta sababtii ay u tageen Soomaaliya.
Xildhibaan Barre Aadan Ducaale ayaa ku taliyay in Dowlada Kenya ay go’aan degdeg ah ka gaarto weerarkii looga laayay ciidamada.
Ugu danbeyntii Ciidamada Kenya ayuu ugu baaqay inay ka aargoostaan Alshabaab si uu yiri ay usoo laabato niyada qoysaska ciidamada la laayay.